China Tube Fiber Laser Cutting Machine Mpanamboatra sy mpamatsy | Guo Hong
Milina fanapahana laser fibre Tube dia natao manokana ho an'ny fantsona, mora ampiasaina. Miaraka amin'ny kalitaon'ny fanapahana tsara sy ny fahombiazan'ny fanapahana, ny fanapahana laser fibre fantsom-bozaka dia ampiasaina amin'ny fitaovana fanatanjahan-tena, karazana fantsona maro samihafa, fantson-drano, fantson-tsolika ary indostria hafa, ary ampifanarahana amin'ireo fitaovana fantsona miendrika manokana toy ny: fantsom-boribory, fantsona toradroa, fantsona mahitsizoro, fantsona boribory, sns.
Masinina fanapahana laser fibre hafainganam-pandeha haingam-pandeha, mora ampiasaina.
Fahombiazana avo lenta, avo lenta ary azo itokisana.
Chuck pneumatic miompana mandeha ho azy tanteraka
170mm chuck pneumatic mandeha ho azy tanteraka, fiara fitaterana;
Fomba fiasa mandeha ho azy mahery vaika, in-3 ny hafainganam-pandehan'ny chuck elektrika, mety sy mahomby;
Pneumatika super clamping hery, ny mavesatra fantsona clamping dia mafy orina, ny fanapahana marina tsara;
Rafitra fanapahana fantsom-pahaizana
Izy io dia manohana ny fanapahana fantsom-pandrefesana avo lenta sy avo lenta ary fantsom-boaloboka, fantsom-batana, elliptika ary fantsona hafa mihinjitra, ary koa vy vy sy fantsom-by
· Fanonerana ny familiana ifotony amin'ny fotoana tena izy
· Fahatanterahana mazava tsara ny perforation
· Manohana ny famolavolana zorony tsirairay
· Tohano ny haitao mandroso toy ny teboka mangatsiaka, fanapahana peratra zoro maranitra, zoro famotsorana, sns.
Bira fandriana iray
Ny farafara dia ahosotra amin'ny hafanana avo 800 C hanalana ny adin-tsaina anatiny. Ny masinina iray manontolo dia mifangaro tanteraka, miaraka amin'ny fahombiazan'ny rafitra tsara sy ny fiainana lava
Ny endrika tsy manam-paharoa firafitry indostrialy manome azy fitoniana ambony indrindra sy ny fanoherana ny hovitrovitra avo kokoa ary ny kalitaon'ny fahamandoana.
Puckatic pneumatic miorina eo anoloana sy aoriana
Tube laser fanapahana milina afaka mahatsapa ny mety habe sy ny endri-javatra endri-javatra fanodinana ny sarotra fantsona rafitra toy ny cutting.chamferinq, grooving na lavaka, isa sy ny hafa.
Modely milina GHJG-F6020T (500W-1500W)
Max. hafainganam-pandehan'ny hetsika 100m / min
1. Tube Tube haingam-pandeha, mora tapaka
2. Lalana azo antoka Linear, hafainganam-pandeha avo lenta sy marim-pototra, fahafaha-mavesatra ary henjana.
3. Rafitra fanaraha-maso matihanina, fanapahana haingam-pandeha.
4.Ny fizarana rano mangatsiaka, manome antoka fa tsy miova ny mari-pana amin'ny rano.
Latabatra fiasan'ny tantely 5.Professional sy ny asa Strip, izay mahafaly ny filaharana amin'ny filaharan'ny laser isan-karazany
6. Ity rindrambaiko ity dia mifanaraka amin'ny programa famolavolana maro karazana.
Teo aloha: Plate sy Tube Laser Cutting Machine
Manaraka: Masinina fanapahana laser Tube ho azy
cnc laser tsara indrindra
milina cnc laser tsara indrindra
fanapahana laser tsara indrindra
masinina fanapahana fantsom-laser cnc
faritra fanapahana tamin'ny laser
orinasa fanapahana laser
vy tamin'ny laser
fanapahana laser mazava tsara
Masinina fanapahana laser fibre telo-chuck